Yey ka amar qaataan Ciidamada Imaaraatka Tababaray ee ku sugan Muqdisho ? – Xeernews24
Yey ka amar qaataan Ciidamada Imaaraatka Tababaray ee ku sugan Muqdisho ?
23. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Kumaandooska loo yaqaan, waxaana ciidanka tababaray gacantana ku haya dowlada Imaaraatka Carabta.
Ciidankan ayaa ku howlgala darees ka duwan ciidanka kale ee dowlada, waxaana ciidankan si toos ah mushaar u siiya dowlada Imaaraatka Carabka, waxa ayna saldhig ku leeyihiin Xero agoon iyo Damaanyo.
Waxaa si weyn hada banaanka ugu soo baxaya in ciidankan aysan ka amar qaadan Taliska guud ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo Wasaarada Gaashaandhiga, waxa ayna ciidan amarada ka qaataan Imaaraatka .
Senator Axmed Xaashi Maxamuud, oo ka mid ah Xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Imaaraatka tababaraan aysan dowlada ka amar qaadan una muuqdaan Ciidanka Imaaraatku lee yahay.
Waxa uu sheegay Xildhibaanku in Taliyihii ciidanka xooga Soomaaliyeed isku casilay kadib markii ay ka amar diideen ciidanka Imaaraatka tababaray oo la sheegay in ay katirsan yihiin Milatariga balse aan ka amar qaadan.
”Sida taliyuhu sheegay ciidamada Imaaraartka tababaray ma ahan ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya kana amar qaata taliska, ciidankan ayaana aha kuwa Imaaraatka iyagu toos u maamushaan” Ayuu yidhi Senetar Axmed Xaashi.
Waxa uu isweediiyay Xildhibaanka sida ay magalaada Muqdisho uga howlgalayaan ciidamo aan ka amar qaadan dowlada Soomaalia, waxa uuna tilmaamay in ay ula muuqdaan in ciidankan yihiin kuwa Imaaraatku doonayo in dalku ku qabsado.
Ciidamada Imaarataka Tababaray ayaa dhoor mar horey la sheegay in aysan dowlada ka amar qaadan, waxaana ciidankan yihiin kuwa aan ka qeyb qaadan dagaalada ciidanka dowlada kula jiraan Al Shabaab.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/kashifaad.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-23 17:08:022017-10-23 17:08:02Yey ka amar qaataan Ciidamada Imaaraatka Tababaray ee ku sugan Muqdisho ?
Daawo Wareysi lala Yeeshay sarkaal Sare oo Al Shabaab ka Tirsanaan Jirey sir...